Jurgen Klopp Oo Shaqsi Muhiim Ah Weyn Doona Kahor Kulanka Stadio Olimpico Ee Champions League – Gool FM
(Liverpool) 30 Abriil 2018. Liverpool ayaa xili ciyaareedkan qaadaneysa qaab ciyaareed aad u wanaagsan, gaar ahan kulamada tartanka Champions League, kadib marka ay si xoogan ugu sii dhawaaneyso in ay gaarto kulanka Finalka, kadib markii ay kulankii lugta hore kooxda Roma kusoo xasuuqday 5-2.
Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada macalinka kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp uu waayi doono kaaliyihiisa Zeljko Buvac, kahor kulanka ay kooxda AS Roma ku booqan doonan Stadio Olimpico.
Liverpool, ayaa marti ugu noqoneysa kooxda AS Roma, Arbacada soo socota, kulanka lugta labaad ee tartanka Champions League, garoonka Stadio Olimpico si loo go’aamiyo kooxda u gudbi doonta finalka ka dhici doona magaalada Kiev ee dalka Ukraine.
Wargeyska Sun ayaa qortay in sababta maqnanshiyaha Zeljko Buvac ay tahay ay tahay inuu jiro khilaaf u dhexeeya labada dhinanc, sida uu xaqiijiyay sidoo kale wargeyska Daily Record
Dhinc kale shabakadda Sky Sports ayaa sheegtay in Zeljko Buvac uu ka maqnaan doono kooxda ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka sababo la xidhiidha arimo shaqsiyadeed.
Klopp iyo Zeljko Buvac ayaa wada shaqeynayay tan iyo 2004tii ay ku wada sugnaayeen kooxda Mainz, iyadoo ay jiraan warar badan ee ku aadan in Zeljko uu ahaa maskaxda tababare Klopp, mudadii lasoo dhaafay uu ku gudi jiray shaqada tababarka.
Real Madrid Oo Iska Iibineysa Xidigahan Si Ay U Hesho Mohamed Salah
"Ma jiro saf aan idiin galayno" - Ramos oo si cad runta ugu sheegay Barcelona